Kickdynamic: Hyper-Yakasarudzika Email Zvemukati paVhura | Martech Zone
Chitatu, Ndira 14, 2015 Chitatu, Ndira 14, 2015 Douglas Karr
Makore mazhinji apfuura apo tichishandira iye anokura webasa reemail, isu takashandisa zvinesimba zvemukati matunhu mumakambani edu emaimiriri eemail Iwe unogona kushandura zvemukati zvichibva pane iro data rawakachengetera munhu akanyorera. Chikamu chakaoma ndechekuti iyo data yaifanirwa kukwizwa uye kuunzwa nenzira inonetesa. Kugadzira mitemo mutemplate zvaive zvisiri nyore futi. Panguva yawakatumira email, zvirimo zvakaiswa.
Isu taive nemutengesi mumwe chete wekufamba aive netemplate yaive nemazana emitemo mumushandirapamwe. Vanenge vese vanyoreri vaive ne100% yakasarudzika email. Chiyero chavo chakavhurika uye mitengo yekutendeuka yakakwira.
Paunotumira email yeHTML, iwo mameseji anotumirwa asi mifananidzo inongokumbirwa kana iye anenge achinyorera anovhura iyo email. Izvo zvinopa mukana wakasarudzika wekugadzirisa zvirimo mukati meemail zvinoenderana nekwaari kunyorera uye nezvavari kuita pane iyo data inosanganisirwa nerekodhi yavo.
Kickdynamic ibasa reemail rinokutendera iwe kuvaka akasimba, akasarudzika-akasarudzika maemail ayo anochinja izvo zvirimo panguva iyo email inovhurwa! Heano mienzaniso mishoma:
nzvimbo - Ko kana ndikavhura email iri padhuze nechero kune akawanda ezvitoro zvako mudunhu? Unogona kuratidza mufananidzo wechitoro chandiri padyo kwazvo nemaawa nenzvimbo.
mudziyo - Kana ini ndiri pane mbozhanhare, unogona kuda kupa zoomed mumufananidzo nekuwedzera kujekesa, kana nhare-yakatarwa kupihwa.
Nguva - Kana ini ndichiita makwikwi ane kuverenga pasi, iyo nguva yasara mumakwikwi inogona kuratidzwa panguva yekuvhura.
mamiriro okunze - Pamwe pane dutu rinotenderera uye iwe unoda kusimudzira zvimwe zvigadzirwa kana kuchinaya.
Social - Pamwe ini ndinongoda kugovera yangu yazvino midhiya midhiya midhiya!
Iyo Kickdynamic yekutonga inovaka chigadzirwa chine simba chinokutendera iwe kuti ushandise iyo-yakavhurika inogamuchira mamiriro mamiriro maererano nemamiriro ekunze, chishandiso, zuva / nguva, nzvimbo yekugadzirisa, kugadzirisa & kugadzirisa mifananidzo panguva yekuvhura. Unogona kushandisa mutemo unovaka kuti ugadzire mitemo yakapusa, kana kushandisa zviri zvemberi maficha ezvizhinji zveyakajairika nguva yakashama yekutengesa injini injini.
Chinyorwa chehunyanzvi pane izvi ndechekuti kana iyo email ikavhurwa uye mufananidzo watumirwa… unovharirwa mukati memufananidzo iwoyo wakatumirwa. Mamwe maInternet Service Provider uye mamwe maSeva eemail (senge Shanduro) cache mifananidzo yemuno kune server. Saka kana iwe ukafunga kuita gadziriso mushure mekunge munhu akanyorera avhura email, ivo vanowana iwo mufananidzo wakachengetwa.
Takaita bvunzo mumazuva iwayo ekutanga apo isu taitumira edu ekupedzisira blog mablog (chinyorwa chakarongedzwa pane iyo yekumashure mufananidzo) asi sezvo iyo URL yekukumbira iyo chifananidzo haina kuchinja kubva kuemail kuenda kuemail, iwo chete mufananidzo wakaramba uchiratidza kumusoro. Sezvo iwe usingakwanise kushandura nzvimbo yemufananidzo pane nhunzi mune yekuenda email HTML, haugone kudzokera kumashure uye kugadzirisa iwo mufananidzo.
Zvakanyanya chaizvo izvo Kickdynamic inyanzvi mumhando idzi dzechokwadi-nguva yemunhu zvemukati mune email. Pamwe nekuyedza uye analytics mupuratifomu yavo, zvinoita sekunge vaine mhinduro yakasimba kwazvo yemameseji akasarudzika.
Tags: email ine simbaine email ine simbaekickdynamiczvemunhu zvakavanzika zvemukati
Supermetrics: Tora Zvese Zvako Zvekuongorora Dhata muGoogle Docs kana Excel